တရုတ် Mini ကို Humidifier, Mini ကို USB Humidifier, Mini ကိုလေတပ် Humidifier ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:mini ကို Humidifier,Mini ကို USB Humidifier,Mini ကိုလေတပ် Humidifier,Mini ကိုမြူခိုး Humidifier Cool,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > mini ကို Humidifier
mini ကို Humidifier
mini ကို Humidifier ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, mini ကို Humidifier, Mini ကို USB Humidifier ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Mini ကိုလေတပ် Humidifier R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Led Light Oils သေးသေးလေးများပါသော Mini Humidifier
အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအိတ်ဆောင် Ultrasonic Cool Mist Humidifier
Mini ကို Humidifier အနံ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အနံ့ Humidifier
Mini ကို Humidifier ကားများအတွက်ရနံ့ကုထုံမှုတ်ဆေးဘူး
ခရီးသွားဘို့ Mini ကို Humidifier USB ကား Humidifier
Eco Mini ကို Humidifier မူလစာမျက်နှာလေအေးပေးစက် Humidifiers
ဂန္ထဝင် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ် Mini ကိုမြူခိုး Humidifier
Uk ကနေဒါအိုင်ယာလန်မှ Mini ကို Humidifier ပို့ကုန်
Mini ကို Humidifier ဝါသနာရှင် Plug အတွက်အတူအဘယ်သူမျှမ Filter ကို
Mini ကို Humidifier Cool ခိုးအငွေ့အိတ်ဆောင် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Humidifier
ပစ်မှတ် Walmart အမေဇုံအပေါ်ဂန္ထဝင်ကုန်ပစ္စည်း Mini ကို Humidifier
မွေးကင်းစကလေးငယ်ကလေးများအဘို့အ PP ကို ​​ABS Mini ကိုရွှင်လန်း Humidifier
Desk များအတွက်စတိုင်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျ Mini ကို Humidifier
အိပ်ခန်းရုံးများအတွက် 100ML Mini ကို Humidifiers
ဆီနှင့်အတူ Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier Walmart ပျံ့
အမေဇုံ 150 ml ကိုအနံ့နံပျံ့တွင်ရောင်းချ
အမေဇုံခရီးသွားအငွေ့ Humidifier Air ကိုစင်ကြယ်စေ
Mini ကိုရနံ့ကုထုံကား Ultrasonic အနံ့ Humidifier
မော်တော်ကား Mini ကိုရေပြတ်လပ်မှုကို Power-ချွတ်သည် Air ကို Humidifier
Mini ကို Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Ultrasonic အနံ့ Air ကို Humidifier
Led Light Oils သေးသေးလေးများပါသော Mini Humidifier 2019 နယူးမော်ဒယ်အဆင့်မြှင့် စိတ် ၀ င်စားမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နေ့စဉ်ပင်ပန်းစေသောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုမြှင့်တင်ပေးသောဤရေနံပျံ့နှံ့မှုသည်ခေါင်းမာသောဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ရောင်စုံဒီဇိုင်း - အနံ့မွှေးပျံ့နှံ့မှုသည်သင့်ကလေး၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအလင်းရောင် ၇...
အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအိတ်ဆောင် Ultrasonic Cool Mist Humidifier အင်္ဂါရပ်များ: Cool Mist, ရနံ့ကုထုံး, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ၁, ၃ နာရီသို့မဟုတ် ၄ င်းအပေါ်ထားရန်အချိန်ညှိနိုင်သောအချိန်။ သင့်စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်ရန် ၇ အရောင်ချိန်ညှိချက်များ။ ရေနည်းလာသောအခါအလိုအလျောက်ပိတ်ပါ 4-6...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 7.08 - 7.69 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ် Box ကိုနဲ့ Master ပုံး
Mini ကို Humidifier အနံ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အနံ့ Humidifier တိတ်တဆိတ်အနံ့၏အဖော်ခံစား တစ်ဦးကနေသာနေ့လည်ခင်းတစ်ဦးစာအုပ်, သီချင်း, သင်၏အလုပ်ကဆင်းထားပါအနံ့တစ်ခု whiff, ရနံ့ကုထုံပျံ့အသံတိတ်ညဥ့်သင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာရာရစေနှေးကွေးစွာအိပ်စက်ခြင်းသို့ကျဆင်း, အိပ်မက်ချိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမွှေးအကြိုင်၌နှစ်ပြီးသော။...
Mini ကို Humidifier ကားများအတွက်ရနံ့ကုထုံမှုတ်ဆေးဘူး ဤသည်ကို USB အနံ့မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier ultrasonic humidifier ချောမွေ့ခိုးအငွေ့ပေးသည်နှင့်အံ့သြဖွယ်အေးဆေးတည်ငြိမ်, လျှော့ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်စေရန်အနံ့, လေထု humidifier ခြောက်သွေ့ CHAP အသားအရေပျော့ပြောင်းနှင့်ငယ်အထောက်အကူပြု ultrasonic...
ခရီးသွားဘို့ Mini ကို Humidifier USB ကား Humidifier ရောင်စုံမီးလုံး, 1 အသားအရေစိုပြေ, ရနံ့ကုထုံ, built-in ရောင်စုံမီးလုံး, အော်တိုအရောင် switching, အလိုတော်မှာပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူရင်ခုန်စရာလေထု, အရေပြားများအတွက်ဂရုမစိုက်, အသက်ရှင်ခြင်းအချို့ရင်ခုန်စရာကဗျာ add ကြကုန်အံ့။ အလင်းနှင့်မျှမတောက်ပခြင်းမရှိပါ,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 7.54 - 8.46 / Piece/Pieces
Eco Mini ကို Humidifier မူလစာမျက်နှာလေအေးပေးစက် Humidifiers ဤသည် ultrasonic အနံ့ပျံ့ယခင်မော်ဒယ်များထက်ပိုပြီးအခိုးအငွေ့နှင့်အနံ့ထုတ်လုပ်မယ့်ဒုတိယမျိုးဆက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဖြစ်ပါတယ်။ Ultrasonic ပျံ့သင့်ရဲ့အိပ်ခန်း, kid`s အခန်းတစ်ခန်း, ရေချိုးခန်း,...
ဂန္ထဝင် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ် Mini ကိုမြူခိုး Humidifier ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအချိန်တစ်ခုတိုးပွားလာငွေပမာဏကိုသုံးစွဲ ... အဘယ်ကြောင့်လေထုသန့်ရှင်းစေမအနံ့ပျံ့နှင့်အတူကောင်းစွာရှူရှိုက်! ရနံ့ပျံ့, ioniser, လေ humidifier, လေသန့်ရှင်းစေသောနှင့်သိမ်မွေ့စိတ်ဓါတ်များအလင်း၏ -...
Uk ကနေဒါအိုင်ယာလန်မှ Mini ကို Humidifier ပို့ကုန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ကဘာလဲ? ရေနံပျံ့လေထုထဲသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ element တွေကိုပေးပို့ကြောင်းသေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ Mini ကိုပျံ့လေထုသန့်စင်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကမွှေးကြိုင်ရေနံ၏နူးညံ့သိမ်မွေ့အငွေ့ကိုရှူရှိုက်သောအခါ,,...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 10 - 9.23 / Piece/Pieces
Mini ကို Humidifier ဝါသနာရှင် Plug အတွက်အတူအဘယ်သူမျှမ Filter ကို Humidify: လေထု humidifier နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းအခန်းထဲမှာလေ humidifies ကျနော်တို့အသက်ရှူလေထု၏အရည်အသွေး refresh, အခန်းများတွင်အပူချိန်ညှိ။ အလှအပ: အနံ့ humidifier အသားအရေလန်းဆန်းပြီးအသားအရေစောင့်ရှောက်မှုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရနိုင်သည်,...
Mini ကို Humidifier Cool ခိုးအငွေ့အိတ်ဆောင် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Humidifier ကျွန်ုပ်တို့၏ usb humidifier ခန္ဓာကိုယ်များစွာသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ယားယံစေနိုင်သည်ကိုခြောက်သွေ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့လေမှအစိုဓာတ်ကိုဖြည့်စွက်။ တစ်ဦးက mini ကို humidifier အရေပြား, နှာခေါင်း,...
ပစ်မှတ် Walmart အမေဇုံအပေါ်ဂန္ထဝင်ကုန်ပစ္စည်း Mini ကို Humidifier ပိုများသောအံဝင်ခွင်ကျဒီဇိုင်း အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်ဒီဇိုင်းပလပ်စတစ်ပျံ့ High-grade ကိုမှန်ကန်စေသည်ဆိုစိတ်ကူးများအတွက်လှပစုံလင်သောကြည့်ရှုပါ။ ထူးခြားတဲ့ရှုခင်းကိုဖန်တီးရန်တစ်အလှဆင်အပိုင်းအစအဖြစ်အသုံးပြုပါ။ တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ် Ultrasonic စစ်ဆင်ရေး Ultrasonic...
မွေးကင်းစကလေးငယ်ကလေးများအဘို့အ PP ကို ABS Mini ကိုရွှင်လန်း Humidifier မှော်ငွေ့၏ရေတံခွန်! တစ်ရောင်စုံအလင်းနှင့်အတူကပြီးပြည့်စုံသော ambiance ပေးသည် နောက်ဆုံးပေါ် ultrasonic Atom နည်းပညာ သင့်ရဲ့အခန်းကိုလာဗင်ဒါ၏အံ့သြဖွယ်ရနံ့ (ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်မည်သည့်ရနံ့) နဲ့ပြည့်စုံလိမ့်မည်...
Desk များအတွက်စတိုင်နဲ့အံဝင်ခွင်ကျ Mini ကို Humidifier ဘေးကင်းလုံခြုံ, အပူ-အခမဲ့ ultrasonic ရနံ့ကုထုံပျံ့ အဆိုပါအနံ့ပျံ့နေဆဲသင့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေမြှင့်တင်ရန်သဘာဝအနံ့၏ ultra-ဒဏ်ငွေအခိုးအငွေ့ emitting စဉ် ultrasonic ပျံ့လုံခြုံ, အပူ-အခမဲ့အတှေ့အကွုံကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း ultrasonic နည်းပညာအသုံးချ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 127 127 * 195mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 540 * 405 * 410mm / 24PCS
အိပ်ခန်းရုံးများအတွက် 100ML Mini ကို Humidifiers မစိုက်, သင့်စိတ်ထဲ invigorating ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစင်ကြယ်စေတဦးတည်းကြော့နှင့်စတိုင်ပလပ်စတစ် diffuser.From ၌အကြှနျုပျတို့၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်လိုက်မယ်အဆိုပါခေတ်မီဆန်းပြား, ခံစားချက်-တိုးမြှင့် mini ကို humidifier...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 110 110 * 245mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 455 * 345 * 510mm / 24PCS
ဆီနှင့်အတူ Ultrasonic Cool မြူခိုး Humidifier Walmart ပျံ့ သင့်ရဲ့ရနံ့ကုထုံ bestie တွေ့ဆုံရန်! အဆိုပါ Ultrasonic အနံ့ပျံ့နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး dituo မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအနည်းငယ်ကျဆင်းမှုအပေါ်တစ်ဦး button ကိုတစ်ဦးထိတွေ့မှုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အိမျတှငျအဆုံးစွန်မွှေးကြိုင်လေထုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ လေထု...
အမေဇုံ 150 ml ကိုအနံ့နံပျံ့တွင်ရောင်းချ ရတာဟာ Ultrasonic မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့သင်အိပ်ချင်နေနည်းနည်း noise.It နှင့်အတူတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်နိုင်သော ultrasonic နည်းပညာဟောင်းနွမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ချမှတ်ထားတဲ့အနံ့ပျံ့တဲ့ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ -Made, ultrasonic humidifier ကသိပ္ပံနည်းကျနှင့်...
အမေဇုံအကောင်းဆုံးရောင်းချသူမရှိမဖြစ်ရေနံအနံ့ပျံ့ 150ml ဤသည်ဘက်စုံသုံး mini ကို humidifier တစ်အနံ့ပျံ့, humidifier နှင့်ရောင်စုံ LED စိတ်ဓါတ်များအလင်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ ultrasonic အနံ့ပျံ့ function...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 110 110 * 210mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 455 * 345 * 440mm / 24PCS
အမေဇုံခရီးသွားအငွေ့ Humidifier Air ကိုစင်ကြယ်စေ7ပြောင်းခြင်း Led အလင်းများ: ပလတ်စတစ်ပျံ့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအဘို့အ7အရောင်ပြောင်းခြင်းမီးခွက်ရှိပါတယ်။ သင်က7LED မီးလုံး (အရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ / ပေါ်မှာတည်ငြိမ်) ကိုထိန်းညှိဖို့အလငျး button ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးစီထွန်းတောက်မှိန် Modes...
ပွော့အလင်း Mini ကိုအနံ့ပျံ့ USB ကား 50ml Dituo ကားထဲတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့တဲ့ 100 ရာခိုင်နှုန်း BPA အခမဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်အတွက်အစိုဓာတ်, အနံ့အခမဲ့နှင့်လတ်ဆတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကို USB...
မော်တော်ကား Mini ကိုရေပြတ်လပ်မှုကို Power-ချွတ်သည် Air ကို Humidifier AN ရနံ့ကုထုံအိုအေစစ်သင့် CAR င့သငျ့စိတျ, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားနည်းနည်းအနားယူနှင့်လှုံ့ဆော်နှင့်သင့်အာရုံနှိုးပါလိမ့်မယ်တဲ့အံ့သြဖွယ်ရနံ့ကုထုံအိုအေစစ်သို့သင့်ရဲ့မိုးလုံလေလုံနေရာများအသွင်ပြောင်း။ ကား, SUV ကား, ရုံးသို့မဟုတ် home...
Mini ကို Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ Ultrasonic အနံ့ Air ကို Humidifier ဤသည်မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ဒီအားလပ်ရက်ရာသီသည်သင်၏အာရုံ၌မွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ရောက်လာဖို့အများကြီးပိုပြီးအဘို့အရန်သေချာပါ! LED အလင်းနှင့် ultrasonic အခိုးအငွေ့ပြောင်းလဲနေတဲ့7အရောင်များဟာမြူပါးစပ်ထွက်ကြွလာ! ဤသည်သစ်သားဘောဇဉ်ပျံ့စဉ်ဆက်မပြတ် 6...
တရုတ်နိုင်ငံ mini ကို Humidifier ပေးသွင်း
Mini ကိုမြူခိုး USB Air ကို Humidifier Cool
Mini ကို Humidifier ပေါ့ပါးပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူပန်းအိုး shaped humidifier ဖြစ်ပါတယ်။ ultrasonic နည်းပညာနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်အစိုဓာတ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာရစေဖို့အေးမြအခိုးအငွေ့တွေထုတ်လုပ်နေဖြင့်ထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျဖုံးလှမျး။ သားသမီးရဲ့အခန်းတစ်ခန်းနှင့်ပိုသင့်ကား, ရုံး, အိပ်ခန်း, လေ့လာမှုအခန်းတစ်ခန်း, ထမင်းစားခန်းများအတွက်သင့်လျော်သော။
Mini ကိုမြူခိုး Humidifier Cool: ကြိမ်နှုန်းမြင့် Atom ပန်းကန်နှင့်အတူဒီဇိုင်း။ ဒါဟာအလျင်အမြန်အခြေခံအသားအရေကိုထိုးဖောက်ပြီးခြောက်သွေ့အသားအရေသက်သာရာနိုင်သည့်ဒဏ်ငွေ Nano-class ကိုအေးမြခိုးအငွေ့မော်လီကျူးများထဲသို့ရေ oscillate နှင့်ပြိုကွဲဖို့ ultrasonic နည်းပညာချမှတ်။
user-ဖော်ရွေဒီဇိုင်း: Lightweight နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ဒီ Mini ကိုလေတပ် humidifier ရေ 80ml မှတက်ကိုင်နှင့်တစ်နာရီလျှင်စိုဓာတ် 25ml အထိထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဓိကအင်ဂျင်နှင့်ရေခွက်ကိုနှစ်ဦးစလုံးသန့်ရှင်းရေးနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူ, လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တိုးတိုးလေး-တိတ်ဆိတ်: က Ultra-တည်ငြိမ် Atom ပန်းကန်တစ်တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပြေလျော့သွားပတ်ဝန်းကျင် (35dB ထက်နည်း) အတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ခိုးအငွေ့ပေးစွမ်းသည်။ အနိမ့်စားသုံးမှုနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံအချိန်အိပ်ပျော်နေသောသို့မဟုတ်ဖတ်နေဘို့ကပြီးပြည့်စုံသောစေ။ မည်သည့်အနှောက်အယှက်ဆူညံသံကိုထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော: အကိုရေအဆင့်ကိုလုံခြုံရေအဆင့်ကိုထက်နိမ့်သည့်အခါ Built-in ရေအဆင့်ကိုအာရုံခံကိရိယာနှင့်အတူ, mini ကို usb humidifier ကိုအလိုအလျောက်ပိတ်ထားပါဝါပါလိမ့်မယ်။ မဆို USB ပါဝါအရင်းအမြစ် (AC ပါဝါ Adapter က, ကားတစ်စီးအားသွင်း, လက်တော့ပ် / ကွန်ပျူတာများ, သို့မဟုတ်အာဏာကိုဘဏ်များ) နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တစ်လောကလုံးနှင့်အဆင်ပြေ။ တစ်ဦး 5V အနိမ့်ဗို့အား input ကိုနှင့်အတူလုံခြုံသော။
Mini ကို USB Humidifier
Mini ကိုလေတပ် Humidifier
Mini ကိုမြူခိုး Humidifier Cool
Mini ကို Humidifier Uk